Sirdoonka Britain oo la sheegay in looga digay Yusuf Zaqhba - BBC News Somali
Sirdoonka Britain oo la sheegay in looga digay Yusuf Zaqhba
7 Juunyo 2017
Xafiiska arrimaha gudaha Britain ayaa la kulmaya su'aalo la xiriira mid ka mid ah ragii London weerarka ka gaystay oo la sheegayo in la dhayalsaday.
Talyaaniga ayaa sheegay inay u digeen Yusuf Zaqhba ka dib markii ay ka shakiyeen inuu taageero u yahay kooxda Daacish oo markaasina uu isku dayay inuu dalka Suuriya u safro.
Hay'addaha sirdoonka ee M15 iyo Scotland Yard ayaa lagu dhaliilay qaabka ay ula tacaaleen xogtii sirta ahayd ee ku saabsanayd Khurum Butt, oo baaritaan lagu sameeyey ka hor inta aanu fulin weerarkii baabuurka iyo midiyaha loo adeegsaday ee dhacay sabtidii.
Balse, wasaarada arrimaha gudaha ayaa iyaduna su'aalo laga waydiinayaa dhinca socdaalka iyo ammaanka xuduudaha, kadib markii la ogaaday in qofkii labaad ee ka qeyb qaatay weerarka oo la oron jiray Yousef Zaghba loo ogolaaday in uu soo galo ingiriiska
Zaghba oo haysta dhalashada Talyaaniga balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Moroco, ayaa waxa lagu xiray talyaaniga sanadkii la soo dhaafay kadib markii looga shakiyey in uu ku luglahaa falal argigixiso.
Warar iloodyo laga helay talyaniga ayaa tilmaamaya in aanan la maxkamadeyn Zaghba, balse magaciisa lagu daray liiska dadka isha lagu hayo ee kunool Yurub.
Sirdoonka Britain oo baaraya "digniintii" qaraxa Manchester
Markii Zaghba uu soo galay UK, waxay ahayd in sarakiisha waaxda socdaalka ay helaan maclamaadkaas madaama lala wadaagay dhamaan waddamada Yurub
Warar aanan la xaqiijin ayaa waxa ay tilmaamayaa in la qabtay ninkan markii uu soo galay UK bishii January, balse dib laga siidaayey
Xafiiska arrimaha gudaha waa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo arrimahaasi.